8 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday bandhig faneedka Hip-hop ee Houston
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 8 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday bandhig faneedka Hip-hop ee Houston
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Music • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
8 qof ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday bandhig faneedka Hip-hop ee Houston.
Arrimaha amniga ayaa ahaa arrin walaac laga qabay xitaa ka hor inta aysan munaasabadda bilaaban. Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in dad badan la tuntay ka dib markii boqolaal ay xoog ku galeen garoonka NRG Stadium, iyaga oo dib u riixaya dhufeysyadii ammaanka, jabiyay xayndaabka ka hor inta aysan bandhigtu bilaaban waxayna jeexjeexeen biraha sheega.
Dad badan ayaa cagta la mariyay ka dib markii boqolaal ay xoog ku galeen garoonka NRG, iyaga oo dib u riixaya dhufeysyadii ammaanka.
Adeegyada degdegga ah ayaa la soo wacay ka dib markii dhaawacyo badan la soo sheegay habeenkii furitaanka ee Bandhigga Muusikada Astroworld.
Dad badan ayaa la geeyey isbitaal ku yaal deegaanka Houston ee gobolka Texas kadib markii ay dhaawacyo soo gaareen.
Ambalaasta, dabdamiska iyo adeegyada kale ee degdega ah ayaa loo yeedhay ka dib markii dhaawacyo badan la soo sheegay habeenkii furitaanka ee bandhig faneedka hip-hop ee Houston, Texas.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Waaxda Dab-damiska ee Houston, siddeed qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho intii uu socday Bandhig Faneedka Astroworld.
"Waxaanu xaqiijinay sideed dhimasho ah waqtigan," madaxa dab damiska Houston Samuel Pena ayaa u sheegay suxufiyiinta, isaga oo intaa ku daray in guud ahaan, 23 qof laga soo qaaday goobta.
"Dadku waxay bilaabeen inay isku cadaadiyaan dhinaca hore ee masraxa, dadkuna waxay bilaabeen inay argagaxaan," ayuu yidhi madaxa.
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya kalkaaliyayaal caafimaad oo CPR ku sameynaya dhowr qof oo dhulka jiifa meel ka baxsan masraxa, iyadoo muusiga qaylada badan uu gadaal ka sii ciyaarayo.
Fiidiyow kale ayaa muujinaya koox taageereyaal ah oo isku dayaya inay soo galaan iyagoo kor u qaadaya xayndaab.
Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in qaar ka mid ah dadkii ka qeyb galayay riwaayadaha ay boolisku ku xireen albaabka laga soo galo.
Bandhiga Astroworld Music Festival 100,000 tigidh ayaa la iibiyay saacad gudaheed marka la iibiyo bisha May. Ku dhawaad ​​50,000 oo taageere ayaa ka soo qaybgalay dhacdada labada maalmood ah.
Bandhiga xafladda waxaa ka mid ahaa xiddigaha hip hop Travis Scott, Young Thug, Lil Baby, SZA, iyo muuqaal yaab leh oo uu sameeyay Drake, iyo kuwo kale.